Indlu epheleleyo kufuphi neBucharest (35km) - I-Airbnb
Indlu epheleleyo kufuphi neBucharest (35km)
Fierbinti Targ, Ialomița, Romania
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNicolae
UNicolae ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ipholile kwaye ikhululekile, ivintage encinci, kodwa yanamhlanje, iyaphumla. Yindlu yethu yasemaphandleni, ngoku iyafumaneka kumaqela eendwendwe (3-5).
Iindwendwe zangaphambili ezikhethe indawo yethu kwakhona ziya kuba nesipho esikhethekileyo se-10% isaphulelo, nangona sinelungelo lokukhetha.
Indlu ifumaneka kwiindwendwe ngexesha lasehlotyeni kuphela. Sikwanayo negadi ezele ziirozi nezinye iintyatyambo. Kwimeko apho ufika xa iziqhamo zivuthiwe, ukhululekile ukuba uzikhethele kwaye ungcamle. Kukwakho necanopy yokhuni apho unokukhuselwa khona elangeni elitshisayo lasehlotyeni laseRomania.
Ngesicelo sinokubonelela ngezi zinto zilandelayo kwiintsana: ibhedi yomntwana, isihlalo sokutyela umntwana kunye nebhafu yokuhlambela yomntwana. Kwakhona, zininzi izinto zokudlala ngaphakathi endlwini, ngaphandle kweyadi, kunye necanopy yangaphakathi-i-tricycle kunye nebhayisekile yabantwana ebandakanyiweyo, kunye nesigcina-ntloko esinye sokhuseleko.
Indawo ejikeleze ilali intle. Indlu ngokwayo inesitiya esihle, esineentyatyambo ezininzi nemithi.
Ngamanye amaxesha, iinqwelomoya zidlula kwaye zibonisa umdlalo omnandi wezibane ukuba kwenzeka ngokuhlwa. Kodwa oku ngamanye amaxesha kuphela.
Umbuki zindwendwe ngu- Nicolae
We truly welcome you as our guests, not just customers.
Sihlala eBucharest, ke ukuba ufuna ukusingathwa kwindlu yethu yasemaphandleni, siza kubamba kwaye sithathe izitshixo. Singanikezela ngokhenketho lweendawo ezisingqongileyo (iivenkile, icawa yendawo, iMonastery yaseCaldarusani, iMotorPark Adancata) kunye nokuncokola.
Sihlala eBucharest, ke ukuba ufuna ukusingathwa kwindlu yethu yasemaphandleni, siza kubamba kwaye sithathe izitshixo. Singanikezela ngokhenketho lweendawo ezisingqongileyo (iivenki…